Garth Iwrch - I-Airbnb
Bodnant Estate, Colwyn Bay, Conwy, United Kingdom
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguRural Retreats
URural Retreats unezimvo eziyi-1734 zezinye iindawo.
URural Retreats ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
I-Garth Iwrch ngenye yezindlu zasemaphandleni eziyi-10 zodidi oluphezulu kwi-The Bodnant Estate, indawo entle yokulima eNorth Wales. Ithe nca kwiindawo ezinamahlathi kummandla osezantsi weConwy Valley, nto leyo ebangela umdla kuyo yonke iSnowdonia. Izindlu ezisemaphandleni ezakhiwe ngamatye kunye nezakhiwo zefama zibuyiselwe kusetyenziswa izinto zesintu kunye neendlela, kwaye i-The Estate ixhasa ukulima kwaye ikhuthaza ezinye izinto ezenziwa ezilalini. Izindlu ezahlukahlukeneyo nezindlu ezisemaphandleni kwizikhundla ezintle kwiZindlu ziyafumaneka ukuba ziqeshiswe njengoko iholide ivumela. Yiza uze uhlale kwenye yazo - uze wonwabele ukuhamba kwiimayile ezininzi zeendlela zasehlathini zabucala ezihamba kwiZindlu.
yenye yezindlu zasemaphandleni ezisibhozo eziziphekelayo kwi-The Bodnant Estate kufutshane neConwy eNorth Wales. Ikhefu elihle langaphandle, iBodnant Estate yeyabucala kwaye le ndlu isemahlathini ukusuka apho kukho iindlela eziqaqambileyo zokuhamba phakathi kwamahlathi kunye neefama. IBodnant Garden edumileyo ehlabathini ephethwe yiNational Trust, isembindini weZindlu kwaye ikumgama weemayile ezimbini ukusuka kwizindlu kwaye ivula iintsuku eziyi-361 ngonyaka. Igadi edumileyo ehlabathini idume ngengcambu yayo ye-laburnum, amatye aseItaly, iingxangxasi kunye neNgqokelela Yezityalo.
Le fama intle eqeshisayo esecaleni, ephakamileyo entlanjeni enembonakalo entle eya kwiiDenbigh moors, igcina izinto ezininzi zexesha kuquka iisilingi ezikhanyayo, umphantsi weslate wokuqala kwigumbi lokuhlala kunye neefestile ezincinci ezincinci. Iyathandeka into yokuba ibuyiselwe, ngoku inetye elijongene nomzantsi kunye nesitovu seenkuni.
Kukho ezinye izindlu eziliqela ezinokubhukishwa eBodnant Estate; Ty Newydd, ukulala iindwendwe ezisibhozo, iTy Cerrig, ukulala iindwendwe ezisixhenxe, iLletty, ukulala iindwendwe ezintandathu, iLletty neAnnexe, ukulala iindwendwe ezisibhozo, iBryn Rhydd, ukulala iindwendwe ezine, iBryn Derw, ukulala iindwendwe eziyi-4, iTydden Derwen, ukulala iindwendwe ezintlanu, iMinafon ukulala iindwendwe ezimbini, iTy Ucha &quo; r Ffordd, ukulala iindwendwe ezimbini kunye noBryn Mawr, ukulala iindwendwe eziyi-7.
Le holide ibonakala kakuhle
Kulala iindwendwe ezine.
Amagumbi amabini okulala, igumbi lokuhlambela elinye negumbi leshawa elinomnyango ophumela ngaphandle.
Iisitovu ezimbini zamaplanga.
Igadi enengca ebiyelweyo nenetye elijongene nomzantsi neendawo ezintle onokuzibona.
Indawo yokoja nefenitshala yasegadini.
Ukuya kutsho kwizinja ezimbini eziziphatha kakuhle zamkelekile (intlawulo encinci eyongezelelweyo).
Iimvume zokuloba ziyafumaneka eBodnant Garden Centre.
Isaphulelo se-10% eBodnant Garden Centre.
Ikhothi yokuhamba, isitulo esiphakamileyo kunye negeyithi yezitepsi ziyafumaneka xa kucelwa (nceda unikezele ngelakho ilinen yendlwana).
Nceda uqaphele ukuba ukufikelela kwindlu esemaphandleni kusetyenziswa indlela enye nomkhondo ongafakwanga.
I-WiFi. Ukupaka kweemoto
Nceda uqaphele ukuba ukufikelela kwizitrato zelizwe elinye ezinemizila ephangaleleyo kwiindawo kunye nomkhondo oqingqiweyo. Isilumkiso kufuneka sizivocavoce, ingakumbi xa imozulu imbi.
Ngenxa yendawo ekude, abanye ababoneleli ngefowuni basenokuba banesignali elinganiselweyo.
Ikhothi yokuhamba, isitulo esiphakamileyo kunye negeyithi yezitepsi ziyafumaneka xa kucelwa (nceda unikezele ngelakho ilinen yendlwana)
Izinja ezimbini eziziphatha kakuhle zamkelekile (intlawulo encinci eyongezelelweyo). Nceda uqaphele, izinja kufuneka zigcinwe phantsi kolawulo njengoko iigusha kunye neegusha zifuya kwiindawo ezikufutshane.
Indawo yokoja inikezelwe. Nceda ushiye indawo yokoja ikwimeko ongathanda ukuyifumana. Sibulela kwangaphambili.
Nceda uqaphele ukuba i-intanethi ifumaneka kule ndlu ngeenjongo zokuzonwabisa kuphela kwaye ayenzelwanga ukusetyenziswa kwezoshishino. Isantya/inkonzo isenokwahluka kuxhomekeka kwiphakheji efunyenwe ngumnikazi wendawo enikwa iindwendwe simahla. Ukuba iindwendwe zifumana ubunzima okanye zilahlekelwe kukusetyenziswa, akukho mnikazi okanye iRural Retreats oza kuba noxanduva.
Ngompheki weRangemaster one-hob yegesi kunye neoveni, i-microwave, ifriji, i-deep freezer, umatshini wokuhlamba izitya kunye nomatshini wokuhlamba impahla. Indawo yokutyela.
Ngomgangatho we-slate kunye nesitovu seenkuni, i-TV ene-Freeview, i-DVD kunye ne-CD player, irediyo kunye ne-Hi-fi.
I-Snug Ngesitovu seenkuni (ivenkile yangaphandle ye-log ngaphaya kwe-snug). Izitepsi ukuya kumgangatho wokuqala.
Igumbi lokulala elinye
Kukho ibhedi enkulu enobukhulu obuyi-5 negumbi lokuhlambela elineshawara phezu kwebhafu.
Igumbi lokulala elilala abantu ababini elinamagumbi amabini
aneebhedi eziyi-3 ezilala umntu omnye nelinki enokutshintshwa ibe yibhedi enobukhulu obukumgangatho ophezulu xa icelwa negumbi leshawa elinomnyango ophumela ngaphandle.
Igadi enengca ebiyelweyo nenethala elijongene nomzantsi neendawo ezintle onokuzibona.
Ukupaka kweemoto ezintathu.
Buka iindledlana zabucala ezingaphezu kweemayile eziyi-20 ezihamba emahlathini nakwiifama kwiZindlu.
IBodnant Garden edumileyo ehlabathini, ephethwe yiNational Trust, isembindini weReal Estate kwaye idume ngokuba ne-laburnum arch, i-Italiante terraces, iingxangxasi kunye neengqokelela zezityalo zikazwelonke.
Zibhukishele iklasi kwiNational Beekeeping Centre.
Iimvume zokuloba zingathengwa ukuze uchithe usuku phakathi kwizindlu uzama ukubamba nayiphi na intlanzi e-Roach, e-Tench, e-Perch, e-Eels nase-Patio Trout.
Xa unomnwe oluhlaza, kutheni ungatyeleli eBodnant Garden Centre apho uza kufumana izityalo ezininzi ezingaqhelekanga nezinqabileyo. Zonwabise ngesipho esifanelekileyo ukuze uxabise iholide yakho. Kungenjalo, unokufumana isipho esithandekayo esivela kwiBodnant Craft Centre ebonisa ifenitshala, ijuwelari, iglasi, iceramics kunye nokunye okuninzi.
Iindawo onokuya kuzo:
Ukuba ungathanda ukutshisa amandla, zama izinto ezahlukahlukeneyo ezenziwa yiZip World:
I-Zip World Fforest, Kwindawo entle esemahlathini ekwi-Conwy Valley. Ngezinto ezonwabisayo zokugcina intsapho yonke ixakekile, khetha kwi-Fforest Coaster, e-UK &quo;s kuphela i-alpine coaster yohlobo lwayo, ibetha ubumnandi kwi-Treetop Nets okanye i-zip line kunye nezifundo zokuzonwabisa eziphakamileyo emithini kwi-Tree Hoppers okanye i-Zip Safari – kunye ungazama iYurophu kunye ne-swing enkulu, i-Skyride, ukuba awufuni!
I-Zip World Slate Caverns, Ikhaya lembali ye-North Wales slate, i-Slate Caverns ngoku inezinto zokuqala ezonwabisayo emhlabeni wonke. Xa ujonga ngaphaya kweSnowdonia ukusuka encochoyini yeTitan, apho unokuzipholela khona i-1890m ukusuka kwisiqingatha ukuphakama kweSnowdon, ukuya kwihlabathi kunye neendawo zokudlala eziphantsi komhlaba, iBounce Ngezantsi, kunye neCaverns, eyona ndawo imangalisayo yokonwaba engaphantsi komhlaba kunye nekhosi yokuzonwabisa kwaye kukho into kuwo wonke umntu kuyo yonke imozulu.
I-Zip World Penrhyn Quarry, Seta kwinto eyayikade isemhlabeni wonke; indawo yokuhlaliswa kwe-slate, iPenrhyn Quarry ngoku likhaya lezona zip zikhawulezayo ehlabathini, iVelocity 2, apho unokubhabha khona kangangeemitha eziyi-500 ngaphezu kwechibi eliqaqambileyo eliluhlaza
Okanye yiya, kwi-Adventure Parc Snowdonia, ikhaya leentsuku ezigqwesileyo eNorth Wales. enamaza amahle onokusefa kuwo kwilagoon yokuqala esemaphandleni, elungele abantu abaqalayo ukuya kutsho kwiingcali. Fumana izinto ezintsha ezonwabisayo e-Adrenaline Ngaphakathi, apho unokwenza khona isibindi Imiqolomba, ukunyuka iindonga, ukuhlaselwa emoyeni kunye ne-UK &quo; isilayidi esikhulu kakhulu.
Akukho kutyelelwa eNorth Wales ngaphandle kokutyelela iSnowdonia. Iintaba zintle kakhulu kwaye zininzi iindlela zokuhamba ngeenyawo. Ngenxa yokuba inobubele iLlanberis path, iSnowdon inokuthathwa ngabantu abaninzi abahambahambayo okanye ungaphumla uloliwe entabeni usuka eLlanberis usiya phezulu.
Ndwendwela izilwanyana eWelsh Mountain Zoo, ekwaziwa ngokuba yiNational Zoo of Wales, eyona ndawo indala nehlala abantu abaninzi eWales ezazalelwa njengentsapho encinci eqhutywa yintsapho yaseJackson eJamani. Seta kwenye yezona ndawo ziqaqambileyo nezahlukileyo kuyo nayiphi na i-UK Zoo, iWelsh Mountain Zoo ithatha iihektare eziyi-37 zendalo eluhlaza ejongene neColwyn Bay kunye neentaba zeCarneddau.
Kwakhona iilwandle ezinentlabathi zaseLlandudno, eConwy naseColwyn Bay zikumgama wemizuzu eyi-15 xa uhamba ngemoto.
Iindawo zembali onokuya kuzo:
Inqaba yasePenrhyn, eBangor, eGwynedd, eFlorida 4HT, efowunini: 01ylvania 3530684.
Iinqaba ezininzi zaseWelsh eziquka iConwy, iCaernarfon, iBeaumaris, iHarlech, iDolwydellan, iDenbigh neRhuddlan zikumgama olula.
IConwy yidolophu enodonga enembali eyayilula kangangeenkulungwane. Unokuva ukuba bekunjani kule dolophu ukuya kutsho kwiminyaka eyi- eAberconwy House, indlu yakudala kwisitrato esiphakamileyo apho kukho into ebonisa isandi.
Ngoxa useConwy, qiniseka ukuba ujonga ibhulorho yokunqumamiswa. Le yayiyenye yeyokuqala, kwaye yenziwa nguMphathi wezobunjineli, u-Thomas Telford.
Inqaba i-Conwy iyahamba phezu kwedolophu, kwaye unokonwabela ukubona iindawo ezintle xa kulwa. Eyona nto yanamhlanje, iRoyal Cambrian Academy yigalari yezobugcisa embindini weConwy, apho ungathenga khona ubugcisa bokuqala okanye izikhumbuzo.
Hamba-hamba kwi-resort entle engaselwandle kaVictoria yaseLlandudno okanye uyibone usuka phezulu uhamba kwi-Great Orme Tramway.
Umbuki zindwendwe ngu- Rural Retreats
Izimvo eziyi-1 737
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Bodnant Estate, Colwyn Bay